Ukukhangiswa Kwe-imeyili Okukhaliphile Okushayela Ukuguqulwa
Uma wakho marketing kwangaphakathi zichazwe njengofanele, ngichaza ukumaketha kwakho kwe-imeyili njengesitsha sokubamba imikhondo ewela phansi. Abantu abaningi bazovakashela isiza sakho futhi bahlanganyele nawe, kepha mhlawumbe akusona isikhathi sokuguqula empeleni.
Kuyi-anecdotal kuphela, kepha ngizochaza amaphethini ami lapho ngicwaninga ipulatifomu noma ngithenga ku-inthanethi:
Ukuthenga kwangaphambili - Ngizobuyekeza amawebhusayithi nemithombo yezokuxhumana ukuthola imininingwane engingayithola mayelana nomkhiqizo noma insizakalo.
Ucwaningo - Ngizobe sengiphenya isiza senkampani ukuqinisekisa ukuthi zibonakala zivumelekile futhi ngizofuna izimpendulo zemibuzo ethile engingaba nayo ngaphambi kokuthenga.
Khetha ukungena - Uma unikezwe ithuba lokukhetha ukuthola eminye imininingwane, ngenza njalo. Ngomkhiqizo wesoftware, lokhu kungaba iphepha elimhlophe noma isifundo samacala. Okwe-e-commerce, leyo kungaba ikhodi yesaphulelo yangempela.
isabelomali - Angenzi ukuthenga ngaleso sikhathi. Kaningi kunalokho, uma kuyibhizinisi lami ngixoxa ngokuthenga nabalingani bami bese ngilinda kuze kube isikhathi esifanele sokutshala imali ngombono wokuhamba kwemali. Uma kungukuthengwa komuntu siqu, ngingalinda kuze kufike usuku lokuhola noma ngisho nalapho nginamaphuzu athile ngilungele ukushintshanisa okuthengiwe.
Ukuthengwa - Kusuka ocwaningweni lokuthenga, ngizohlala ngingenele kuma-imeyili enqola yokuthenga noma ama-imeyili ochungechunge lomkhiqizo womkhiqizo. Futhi lapho isikhathi silungile, ngizoqhubeka ngithenge.
Angikholwa ukuthi indlela yami yokuthenga yehluke kakhulu kuningi labathengi noma amabhizinisi kumjikelezo wokuthengisa. Ukumaketha nge-imeyili inikeza ithuba elihle lokufinyelela kulabo bantu abashiyile, abalahliwe, noma abangavakashelwanga isikhashana ukuze ukwazi ukubabuyisela kumngcele wakho wokuthengisa.
Ngenkathi amasistimu amadala, ama-batch angaqhamuki nezinhlelo zokuqhuma zimane nje zigxeka abathengi noma amabhizinisi ukuvala isivumelwano, izinqubo ezintsha ze-automation zinikeza amandla angenamkhawulo wokwenza ukulandelana kokuxhumana kuthuthukise amazinga wokuguqulwa jikelele.
Le infographic evela ku-imeyili ithunyelwe, Ungakusebenzisa Kanjani Ukulandelana Kwe-imeyili Okunezingxenye Eziningi Ukukhulisa Ukuguqulwa, Ihlinzeka ngamasu amathathu wokukhulisa izingqinamba zokukhushulwa kwe-imeyili ukushayela ukuguqulwa okuningi:
Uchungechunge noma Uchungechunge lwezihloko - Setha uchungechunge lwama-imeyili abalulekile ukuze ufundise iklayenti noma ikhasimende lakho ongaba nalo kumkhiqizo noma isevisi onethemba lokuyiguqula. Setha okulindelwe ngqo ekunikelweni kwakho kokukhetha ukungena nolayini wezihloko. Isibonelo:
Indlela ye-1 kwezingu-3: Ukwandisa Amanani Wokuguqulwa nge-imeyili Marketing
Inkinga + Hlanganisa + Xazulula - Thula ubuhlungu benkinga bulandelwe uchungechunge lwama-imeyili afundisa umuntu ongaba yikhasimende ngenkinga nangesixazululo. Sivame ukwenza lokhu ngokuthola idatha esekela izinkampani zangaphandle njengemibiko yabahlaziyi, noma ubufakazi bamakhasimende abavela eceleni. Ngenkathi ikhasimende lakho lingaba nenkinga abalisombululayo, libazise amanye amabhizinisi noma abathengi banenkinga efanayo nokuthi uyixazulule kanjani ukuthi izobashayela esinqumweni sokuthenga. Ukuthola ukulandelana kwama-imeyili aqhubeka nokubakhumbuza ngokukhungatheka kwabo kuyindlela enhle yokuwahambisa ekuguqukeni! Isibonelo:
Izingxenye ezimbili kwezintathu zamabhizinisi zibika ukuqaliswa koguquko lwedijithali oluhlulekile
Ukulandelana Kwethuba - Esikhundleni sokugxila enkingeni nasesisombululo sakho, leli qhinga lifaka ukubheka okuhle ngekusasa. Ku-software yebhizinisi, lokhu kuvame ukwenziwa ngochungechunge lwamacala okusetshenziswa achaza amathuba alokho okungatholakala ngokutshalwa kwemali endaweni yesikhulumi. Isibonelo:
Izinzuzo Zokukhuthaza Ipulatifomu Yedatha Yekhasimende Yabahlinzeki Bezinsizakalo Zokunakekelwa Kwezempilo
Ungakhohlwa Ukuthuthukisa Ngamunye imeyili
Ukuklama ukulandelana akuyona yonke indaba… udinga nokwandisa okuqukethwe, wenze ngezifiso ama-imeyili, uthumele okuqukethwe okubhekiswe engxenyeni ngayinye yezimakethe, futhi ulungiselele ikhasi lokufika lapho ikhasimende lakho elizofika khona lizofika khona.
Nazi izibalo ezinhle ngomthelela we ukuthuthukisa okuqukethwe kwe-imeyili kusuka ku-SoftwarePundit:
Okuqukethwe nge izithombe ezifanele thola ukubukwa okungu-94% ngaphezulu, ngakho-ke qiniseka ukufaka izithombe ezifanele ukuveza idatha, izinqubo, noma izindaba zamakhasimende ukukhulisa ukuzibandakanya. Ama-GIF ama-animated nawo ayithuba elihle.
Ukwenza ngcono isilinganiso sokunakwa kuma-imeyili namakhasi okufika kungakhuphula ukuguqulwa ngama-31%. Ukunakwa kwesilinganiselo isilinganiso sesixhumanisi ekhasini lokufika kunombolo yezinjongo zokuguqulwa komkhankaso. Kumkhankaso owenziwe kahle, isilinganiso sakho sokunaka kufanele sibe ngu-1: 1.
Imikhankaso ye-imeyili engxenyeni khiqiza ukuvulwa okungu-30% ngaphezulu nokuchofoza okungu-50% ngaphezulu
Ukususa a imenyu yokuhambisa emakhasini akho okufika kungakhuphula ukuguqulwa nge-100%
Funda Ukuhlolwa kwe-A / B & Izifundo Ezinamacala nge-Actionable Insights
Tags: inqola yokuthenga elahliweukuguqulwa kokuhlelwaukuguqulwaimeyiliukuguqulwa kwe-imeyiliukwakheka kwe-imeyiliuhambo lwe-imeyiliukulandelana kwe-imeyiliisu le-imeyiliinfographicimaliukungena ngemvume